Paarlaamaa Itoophiyaa: Gabaasni Komishinii Mirgoota Namoomaa Itoophiyaa qeeqame - BBC News Afaan Oromoo
Paarlaamaa Itoophiyaa: Gabaasni Komishinii Mirgoota Namoomaa Itoophiyaa qeeqame
23 Amajjii 2020
Image copyright Ethiopian Human Rights Commission
Komishiniin Mirgoota Namoomaa Itoophiyaa gabaasa hojii ji'oota jahaan darbanii mana maree bakka bu'oota uummataa Itooophiyaaf dhiyeessee komiiwwan heddu keessumeesse.
Komishinarri Komishinichaa Daani'el Baqqala (PhD) ji'oota jahan darbanitti dhaabbata maqaa qofaan ture akka haaraatti ijaaruuf hojjetaa turuu isaanii himan.
Rakkooleen mirgoota namoomaa Itoophiyaa keessaa hedduufi wal xaxoo akka ta'an kan dubbatan Dr Daani'el,"dhiittaawwan mirgoota namoomaa hedduu rakkoolee siyaasaa biyyattii irraa maddan," jedhan.
Ji'oota jahan darbanittis buqqa'insi namootaa uumamuu, namootni qaamolee hidhatanin ukkaamfamuu fi ajjeechaan raawwatamuu himan.
'Wixineen seeraa oduu sobaa ittisuuf bahe bilisummaa of-ibsuu balaarra buusa'
Dhaabbileen mirga namoomaafi itti-gaafatamummaa isaanii
“Waggaa darbee jijjiiramni seenaa biyyattii keessatti adda ta'e mul’ateera” Daani'eel Baqqalaa
Haa ta'u malee, komishinarichi lakkoofsa namootaa miidhaan kunneen irratti qaqqabe hin dubbanne.
Qaamoleen nageenyaa hookkara iddoowwan garaagaraatti uumaman akka tasgabbaa'aniif aarsaa lubbuu dabalatee tumsaa turuu isaanii kan dubbatan Dr Daani'el, lammiileen qaamolee nageenyaa federaalaa fi naannoleetin seeraan ala hidhamaniifi ajjeefaman jiraachuu isaanis dubbatan.
Yaada bilisaan ibsachuu
Yaada bilisaan ibsachuu fi walgahiiwwan taa'uun walqabatee, magaalaa Finfinnee dabalatee iddoowwan tokko tokkotti gama qaamolee mootummaatin danqaan akka ture fi kuni furmaata argachuu akka qabus himan.
Gama biraatin iyyanni garagaraa 704 komishinichaaf akka dhiyaatan kan himan komishinarichi "iyyatawwan fudhatama argatan 191 keessaa 22'f furmaata laannerra," jedhan.
Hordoffii fi sakkata'iinsa manneen sirreessaa keessatti taasifameen, rakkoleen akka qulqullinaa, namni walitti baay'achuu, dhiyeessii soorataa akkasumas hojiin amala sirreessuu irratti hojjetamu hanqinoota akka qaban gabaasni komishinii mirgoota namoomaa Itoophiyaa agarsiisa.
Meeshaan kee Miidiyaa taphachiisuu hin danda'u
Mirgoota namoomaa keessan hangam beektan, eenyutu isiniif kabachiisa?
"Duraan qaamolee mootummaatu dhiittaa mirgoota namoomaan himatamaa ture amma garuu kuni jijjiirameera" kan jedhan komishinarri komishinii Mirgoota Namoomaa Itoophiyaa Dooktar Daani'el Baqqala "angawootni siyaasaa furmaata itti laachuu qabu. Namootni yakka raawwatanis gaafatamuu qabu" jedhan.
Hooggansifi miseensootni dhaabbilee siyaasaas itti gaafatamummaan akka hojjetan gaafatan.
Gaafii miseensota mana maree…
Gabaasni Komishinii Mirgoota Namoomaa Itoophiyaa miseensota mana maree bakka bu'ootaan baay'ee qeeqame.
"Gabaasni dhiyaate qabiyyee seerri manni marichaa kaaye kan guute miti. Kun sirreeffamuu qaba," kan jedhan miseensi mana marichaa Obbo Tasfaayee Dhaabaa komishinarichi dhiifama gaafachuu akka qabu dubbatan.
Gabaasni komishinarichi dhiyeessan karooraafi raawwii hojiilee komishinichaa gad fageenyaan ofkeessaa akka hin qabne miseensootni mana maree himan.
Dabalataan raawwiin bajataas gabaasicha keessatti dhiyaachuu dhiisuunsaa komii kaasera.
"Gabaasichi waan qabatamaa of keessaa hin qabu," kan jedhan miseensootni mana maree bakka bu'oota uummataa tokko tokko "gabaasicha hin fudhannu" jedhan.
Miseensi mana maree Obbo Lammaa Tasammaa "gabaasni dhiyaate waanuna namootni alatti haasa'aniin alatti waan of keessatti qabate hin qabu"jedhan.
Dhiittaa mirgoota namoomaa komishinichi himuurraa of qusates ni jiru jechuun miseensootni mana maree bakka bu'oota uummataa himan.
Hooggantootni komishinichaa gabaasa haalaan qindaa'ee koree dhaabbiif dhiyeessine ni qabna jechuun himan.
Dhaabbaticha keessatti rifoormii bu'uraa taasisaa akka jiran kan himan komishinarri Komishinii mirgoota Namoomaa Itoophiyaa Dr Daani'el Baqqala hojii rifoormii fi rakkoolee dhiittaa mirgoota namoomaa biyyattii keessatti uummaman erga takkaa hojjechaa akka jiran dubbatan.
Komishinichi qaamolee garaagaraa walin akka hojjetuuf manni marichaa deeggarsa akka taasisufis gaafataniiru.
Dabalataan amantaa fi fudhatamni komishinichi uummata biraa qabu fi hubannoo uummatni mirgoota namoomaa irratti qabu akka guddatuuf hojjetamaa jiraachus himan.
Komishinii Mirga Namoomaa Itoophiyaa: 'Rifarandamiin Sidaamaa karaa nagaa xumurame'
23 Sadaasa 2019
Viidiyoo Mirgoota namoomaa keessan hangam beektan, eenyutu isiniif kabachiisa?
10 Muddee 2019
HRW: 'Wixineen seera ragaa sobaafi haasaa jibbinsaa bilisummaa dubbachuu balaarra buusa'
20 Muddee 2019
Daani'eel Baqqalaa: “Waggaa darbee jijjiramni seenaa biyyattii keessatti adda ta'e mul’ateera”
6 Adooleessa 2019
Daani'eel Baqqalaa(PhD): Itoophiyaan falmaa mirga namoomaa gameessa muudde
2 Adooleessa 2019
Itoophiyaa: 'Liyyuu poolisii'n eenyuun, akkamiin hundaa'e?
17 Hagayya 2018
"Waggoota 19'f mana hidhaa lafa jalaa naannoo Tigiraay keessatti..."
'Muka firii hinqabne' - loogii dubartoota Niijer dhala dhabanii
Dubbii pireezidant Isaayyaas marsaalee hawaasaa irratti falmii kaase
Paartiin Sosochii Biyyaalessaa Amaaraa hoogganoota isaa jijjiire
Namoonni jaha haleellaa boombii Amboon shakkaman to'ataman
Samsung ergaan akeekkachiisa fakkaatu akkamiin akka namootatti ergame ibse
Koriyaan Kaabaa sodaa koronaavaayirasiin lammiilee biyya alaa qofaatti tursiisuu eegalte
BBC'n badhaasa 'Komlaa Dumoor' bara 2020'f dorgomsiisuu eegale
Abbaan seeraa dubartii ajjeechaan himtamte gargaaruun shakkame